Doorashada Aqalka Sare: Muuse Suudi siyaasiyiinta doonaya inay kursiga ka qaataan maxaad ka taqaannaa? - Bulsho News
Apple oo dadka isticmaala iPhone uga digtay in gariirka mishiinadu...
Doorashada Aqalka Sare: Muuse Suudi siyaasiyiinta doonaya inay kursiga ka qaataan maxaad ka taqaannaa?
13 Sebtembar 2021
Dorashada Aqalka Sare ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa u muuqata inay ka loollan adag tahay dhammaan doorashooyinka la mid ah ee Federaalka, maadaama ay usoo baxeen musharraxiintii ugu badnaa, kuwaasoo maanta khudbadahooda jeedinayay.
Madaxweynaha Hirshabeelle, Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa dhawaan soo dhammeystiray liiska musharraxiinta, halka doorashadana la filayo inay dhacdo isbuucan.
Muusa Suudi wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta tartanka adag u galaya kuraasta Aqalka Sare, oo baarlamaanka hadda jiro uu ku soo metelayay Hirshabeelle.
Khudbaddii uu maanta ka hor jeediyay xildhibaannada baarlamaanka ee maamulkaas ayuu kusoo gaabiyay; “Wax aan soo qabtay ma aqaanno, ,a ii ,iisaanna, sanduuqa dhalada ah ayaan ka arki doonaa, wax aan qaban doonana ma ogi, wixi Alle igu aaddiyo ayay noqon doonaan. Haddii aan xiulka u qalmo iigu celiya, haddii aad i dhibsateenna iga reeba.”
Cabdullaahi Sheekh Xasan, Dr Xasan Cadaay Cali iyo Axmed Xasan Cadoow ayaa ka mid ah, waxaana ay maanta jeediyeen khudbadaha ay xildhibaannada baarlamaanka hoose ee Hirshabeelle uga dalbanayaan inay codadkooda siiyaan.
1- Cabdullaahi Sheekh Xasan
Sida uu isaga qudhiisaba maanta ka sheegay khudbaddii uu ka jeedinayay munaasabadda hadal jeedinta, waxa uu ku dhashay Hirshabeelle balse uu ku soo barbaaray magaalada Muqdisho.
Khudbaddii uu maanta Jowhar ka jeediyay ayuu Cabdullaahi Sheekh ku sheegay inuu mar ka mid ahaan jiray guddi loo xil saaray inay kasoo shaqeeyaan sidii Soomaaliya hubka looga dhigi lahaa.
2- Axmed Casan Cadoow (Daaci)
Xigashada Sawirka, Universal Tv
Axmed Xasan Cadoow
Khudbaddii uu maanta u jeediyay xildhibaannada baarlamaanka Hirshabeelle kama uusan sheegin wax ku saabsan taariikhdiisa, siyaasad iyo waxbarasho toona.
3- Dr. Xasan Cadaay Cali
Dr. Xasan Cadaay Cali waxaa lagu yaqaannay inuu ahaa mid ka mid ah dhakhaatiirtii dalka kasoo howl galay muddadii, gaar ahaan xilligii burburka.
Dr. Xasan Cadaay Cali
Waxa uu ku dhashay degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho, sida uu ka sheegay munaasabaddii hadal jeedinta musharraxiinta ee ka dhacday Jowhar.
“Waxbarashadeyda aasaasiga ilaa heer jaamacadeed waxaan ku qaatay gudaha Soomaaliya. Xilligii nabadda waxaan kasoo shaqeeyay isbitaalka Digfeer, sidoo kale waxaan ahaa madaxa qalliimka ee Isbitaalka Keysaneey,” ayuu yiri.
Waqtigii ay dagaallada ka socdeen dalka, ayuu sida uu sheegay howlo badan ka qabtay arrimaha bulshada iyo gargaarka caafimaadka.
4- Xaaji Muxudiin Xasan Afrax
Muxidiin Xasan Afrax
Liiska musharraxiinta u xusul duubaya inay booska ka saaraan waxaa kale oo ka mid ah siyaasi lagu magacaabo Xaaji Muxudiin Xasan Afrax.
Hase ahaatee, munaasabaddii hadal jeedinta ee maanta lagu qabtay magaalada Jowhar kama uusan soo muuqanin musharraxan.
Mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa laga dhowrayaa inay go’aan ka gaaraan dadka Aqalka Sare ku matali doona afarta sano ee soo socota.
Doorashada Aqalka Sare ee Hirshabeelle ayaa qeyb ka ah wajiga koowaad ee dhammaan maamul goboleedyada looga hirgelinayo xulashada matalaadda Baarlamaanka.
Inta u dhaxeysa bilaha October iyo November ayaa lagu wadaa inay qabsoonto doorashada Aqalka Hoose ee Golaha Shacabka, taasoo waddada u xaari doonta doorashada xilka ugu sarreeya ee madaxweynaha.
SUDAN: Xiisada ka dhex qaraxday Xisbiyadii xukunka ka...
Guddiga xalinta khilaafaadka oo hakiyey kursigii uu ‘ku...
Maareeye oo soo bandhigay xogta Boqor Buurmadow oo...